Thatha idiphu echibini elipinki, iLake Hillier | Ukuhamba kwe-Absolut
Umfanekiso | Iphepha lodonga
IPlanethi yoMhlaba yindawo enomtsalane engaze iyeke ukusimangalisa. Ngaba uyazi ukuba e-Australia kukho ichibi elinamanzi apinki ngokuqaqambileyo? NguLake Hillier, ichibi elinemvelaphi engaqondakaliyo kwisiQithi esiPhakathi, esona siqithi sikhulu kwiziqithi zase-Australia iLa Recherche.
Ukufikelela kwindawo apho iLake Hillier ikhoyo akukho lula. Abakho baninzi abantu ababenethuba lokuyibona buqu ngenxa yezizathu zokhuselo lokusingqongileyo, ubukhulu becala ungabhabha ngaphezulu kwesi siqithi ukubona ichibi elikhwele inqwelo-ntaka ephuma yonke imihla kwisikhululo seenqwelomoya i-Esperance.
Ukuba kwixesha elizayo ungathanda ukuthatha uhambo oluya e-Australia ukuze wazi imihlaba yalo emihle, indalo kunye neendawo zalo ezizodwa njenge ILake HillierEmva koko ndiza kukuxelela ngokweenkcukacha yonke into ngale dike intle yepinki.
1 Yintoni iLake Hillier?
2 Ngubani ofumene iLake Hillier?
3 ILake Hillier yafunyanwa njani?
4 Kutheni le nto amanzi eLake Hillier epinki?
5 Undwendwela njani iLake Hillier?
6 Amanye amachibi awodwa kwihlabathi
6.1 Ichibi leClicos (eSpain)
6.3 ILake Moraine (Canada)
6.4 ILake Natron (eTanzania)
Yintoni iLake Hillier?
Ichibi laseHillier yindawo entle ye-bubblegum epinki engama-600 e-Middle Island, esona siqithi sikhulu kwiziqithi zaseLa Recherche kwiNtshona yeOstreliya, kwindawo yehlathi ekulula ukufikelela kuyo. Iye yaziwa kwihlabathi liphela ngombala owahlukileyo wamanzi ayo, nto leyo eyenza ukuba i-instagrammable. Amava amangalisayo okubonakalayo!
Umfanekiso | Hamba ufunde i-Australia
Ngubani ofumene iLake Hillier?
Ukufunyanwa kweLake Hillier e-Australia yenziwe ngumdwebi weemaphu waseBritani nomqhubi wenqanawa uMatthew Flinders ngenkulungwane XVIII. Umhloli wamazwe owaziwa ngokuba ngowokuqala ukujikeleza isiqithi esikhulu sase-Australia kwaye owayengumbhali weencwadi ezixabisekileyo zokuhlola, ubukhulu becala ezinikele e-Oceania. Izwekazi elinendawo yalo engaphakathi yenye yezona zinto zigqwesileyo nezintle ngokwahluka kwendalo emhlabeni.
ILake Hillier yafunyanwa njani?
Ngomhla wohambo oluya eMiddle Island, I-Flinders igqibe kwelokuba inyukele kweyona ncopho iphakamileyo ukuze ikwazi ukuskena iindawo ezingqongileyo. Kungelo xesha ke awathi wamangaliswa ngulo mfanekiso umangalisayo uvele phambi kwamehlo akhe: lelona chibi lipinki liqaqambileyo lijikelezwe yintlabathi nehlathi.
Omnye umphandi owayengoyiki, uJohn Thistle owayengumphathi wenqanawa, akazange athandabuze ukusondela echibini ngokwalo ukuze abone ukuba iyinyani na into ayibonileyo. Xa esondela, wamangaliswa kwaye akazange athandabuze thatha isampulu yamanzi kwiLake Hillier ukuyibonisa kwabanye abahlobo bakho. Ibe igcina umbala wayo wepinki ongathandabuzekiyo opinki nangaphandle kwechibi. Inokuthetha ntoni?
Kutheni le nto amanzi eLake Hillier epinki?
Yimfihlakalo enkulu yeLake Hillier leyo Akukho mntu ukwazileyo ukutyhila i-100% sisizathu sokuba amanzi ayo abe epinki. Uninzi lwabaphandi lucinga ukuba ichibi linalo mbala ngenxa yeentsholongwane ezikuqweqwe lwetyuwa. Abanye bacinga ukuba unobangela ngumxube weHalobactoria kunye neDalaliella salina. Kule meko akukabikho mvumelwano yenzululwazi kungoko izizathu zihlala ziyimfihlakalo.
Undwendwela njani iLake Hillier?
Yathi iLake Hillier ikwi-Middle Island, esona siqithi sikhulu kwiziqithi zase-Australia zaseLa Recherche. Kuba ukufikelela kunzima kakhulu, Utyelelo lweli chibi lunokwenziwa kuphela ngokubhabha ngaphezulu ngenqwelomoya ngehelikopta ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya i-Esperance. Ngumsebenzi obizayo, kodwa namava amaninzi.
Amanye amachibi awodwa kwihlabathi
Umfanekiso | URauletemunoz weWikipedia
Amachibi afana neMichigan, iTiticaca, iTanganyika, iVictoria okanye iBaikal ngamanye amachibi aziwayo emhlabeni.
Nangona kunjalo, kuwo onke amazwekazi kukho amanzi amancinci angaziwayo athi akhanye ngokokukhanya kwawo ngenxa yemvelaphi yawo, nokuba kungenxa yokwakhiwa kwamanzi awo, isenzo samaqondo obushushu aphezulu kuwo okanye izinto eziphilayo ezihlala kuwo. Ke, Ehlabathini lonke kukho amachibi amahle anemibala eyahlukeneyo ekufanele ukuba uyityelele.
Ichibi leClicos (eSpain)
E-Spain kukho ichibi elikhethekileyo elifana neHillier kodwa Amanzi ayo aqaqambile ngombala opinki kodwa aluhlaza. Yaziwa njengeChibi leClicos kwaye ibekwe kunxweme olusentshona kwidolophu yaseYaiza (Tenerife) ngaphakathi kwepaki yendalo yeLos Volcanes.
Yintoni eyenza ukuba eli chibi lahluke ngombala oluhlaza wamanzi alo ngenxa yobuninzi bezinto eziphilayo ekumiseni. Ichibi Clicos yahlulwe elwandle elunxwemeni lolwandle kwaye idityaniswe kuyo ngokuqhekeka komhlaba. Yindawo ekhuselekileyo ke ngoko ukuqubha akuvumelekanga.
E-Indonesia kukho indawo eyaziwa njenge siqithi iFlores apho i Intaba-mlilo yaseKelimutu, enamachibi amathathu amanzi awo atshintsha umbala: ukusuka kwi-turquoise ukuya kubomvu ngombala ohlaza okwesibhakabhaka kunye nomdaka. Iyamangalisa yinyani? Yinto ekufanele ukuba uyibone eyenzeka ngenxa yokudityaniswa kweegesi kunye nomphunga ovela ngaphakathi kwintaba-mlilo kwaye uvelise iimpendulo ezahlukeneyo zemichiza xa amaqondo obushushu ephezulu.
Nangona yayiyintaba-mlilo esebenzayo, ugqabhuko-dubulo lokugqibela lweKelimutu lwalungo-1968. Ekupheleni kwenkulungwane yama-XNUMX, ummandla wayo wabhengezwa njengepaki yelizwe eIndonesia.
ILake Moraine (Canada)
Ifumaneka e-Alberta's Banff National Park yiMoraine Lake, ichibi elihle elinemvelaphi yomkhenkce emanzi ayo aluhlaza aluhlaza avela kumqolo.
Indawo yayo yendalo iyamangalisa njengoko ijikelezwe ziincopho zeRockies kwiNtlambo yeencopho ezilishumi. Ngobu bungqina, izihlwele zabakhenkethi zithontelana kwiChibi iMoraine ukuya kuthatha izimvo. Amanzi alo akhanya ngamandla emini, xa ilanga libetha ngqo echibini ngqo Kuyacetyiswa ukuba uhambe kuqala ekuseni ukuyibona, xa amanzi ebonakala ekuhleni ngakumbi kwaye ebonakalisa imbonakalo yelizwe entle apho abiyelwe khona.
Ngaphandle kwe ichibi le moraineKwipaki enye yeSizwe yaseBanff ngamachibi asePeyton naseLouise, nawo mahle.
ILake Natron (eTanzania)
Ifumaneka kumda ophakathi kweTanzania neKenya, ILake Natron Eli chibi linamanzi etyuwa avaliweyo, ngaphezulu kweGreat Rift Valley. Ngenxa yesodiyam carbonate kunye nezinye izimbiwa ezihamba zingene echibini zivela kwiintaba ezijikelezileyo, amanzi alo ane-alkaline ane-pH engummangaliso ye-10.5 ngenxa yesodium carbonate kunye nezinye izinto ezihlanganisiweyo zezimbiwa.
Ngamanzi amabi kangako anokubangela ukutsha kakhulu emehlweni naseluswini lwezilwanyana ezisondela kuwo, ezinokufa ngenxa yetyhefu. Ke, iLake Natron inyukile ngesihloko sabona bantu babulala ilizwe.
Kodwa ngokubhekisele kwinkangeleko yangaphandle, eli chibi lifumana umbala owahlukileyo obomvu okanye upinki, ngamanye amaxesha kude kube liorenji kwiindawo ezisezantsi, ngenxa yeentsholongwane ezihlala kuqweqwe olwenziwe yityuwa yealkali. Kuyamangalisa!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Thatha idiphu echibini elipinki, iLake Hillier